२०७६ मंसिर ९ गते १७:२१
मंसिर,९ काठमाडौं । बुद्ध एयरले प्रदेश नं १ बाट प्रादेशिक हवाई उडान भर्ने भएको छ। एयरले मङ्सिर १५ गतेदेखि विराटनगर र भद्रपुरबाट काठमाण्डौ तथा पोखराका लागि उडान भर्ने तयारी गरेको छ। आइतबार आयोजित कार्यक्रममा भद्रपुर र विराटनगरदेखि पोखरासम्मको ट्रान्जिट फ्लाइटसम्बन्धी बोल्दै बुद्ध एयरका प्रबन्ध...
फेरि सुनको मूल्य बढ्यो
२०७६ मंसिर ४ गते १४:३१
काठमाडौं, ४ मंसिर । बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोला एक सय रुपैयाँ बढेको छ । म‌ंगलबार ७२ हजार रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भएको छापावाल सुन बुधबार ७२ हजार १ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यस्तै तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ७१ हजार ८ सय कायम भएको...
२०७६ कार्तिक २९ गते १२:२३
काठमाडौं, २९ कार्तिक । सुनको भाउ आज दुई सय रुपैयाँले घटेको छ। आज साताको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको भाउ घटेर ७१ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ भने हिजो ७२ हजारमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै चाँदीको भाउ पनि घटेको छ। आज ५ रुपैयाँले...
मंगलबार स्थिर रहेकाे सुनकाे भाउ आज बुधबार फेरि बढ्याे
२०७६ कार्तिक २७ गते १५:४६
काठमाडौं, २७ कार्तिक । आज बुधबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढेको छ । हिजो मंगलबार स्थिर रहेको सुनकाे भाउ आज प्रतितोला २ सय रुपैयाँले बढेको हो । आज छापावाल सुन प्रतितोला ७१ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ...
२०७६ कार्तिक २५ गते १९:३२
काठमाडौं, २५ कार्तिक । साताको दोस्रो दिन आज पनि नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य सामान्य वृद्धि भएको छ । शुक्रबार केही घटेको सुनको मूल्य आइतबार र सोमबार पुनः उकालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु २०० ले...
२०७६ कार्तिक १९ गते १९:३७
काठमाडौं, १९ कार्तिक । सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । आइतबार प्रतितोला ७१ हजार २ सय पुगेको सुनको मूल्य आज भने २ सय रुपैयाँ घट्दै ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जनाएको छ । यस्तै, तेजावी सुनको मूल्य पनि आज...
२०७६ कार्तिक १८ गते ११:४५
काठमाडौं, कार्तिक १८ । सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । आइतबार प्रतितोला ७१ हजार २ सय पुगेको सुनको मूल्य आज भने २ सय रुपैयाँ घट्दै ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जनाएको छ । यस्तै, तेजावी सुनको मूल्य पनि आज...
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले सार्वजनिक गर्यो कर्जाको नयाँ ब्याजदर, कुनमा कति ?
२०७६ कार्तिक १७ गते ११:३५
काठमाडौं, १७ कार्तिक । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिष्य वाणिज्य बैंक लिमिटेडले कर्जाको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले शुक्रबारदेखि लागु हुनेगरी कर्जाको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले सार्वजनिक गरेको कर्जाको नयाँ ब्याजदर अनुसार घर कर्जामा बैंकले ९ प्रतिशतदेखि ११.५ प्रतिशत ब्याज...
तिहार लगत्तै घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कतिमा झर्यो ?
२०७६ कार्तिक १४ गते १४:३७
काठमाडौं, १४ कार्तिक । तिहार सकिएसंगै सुनको मूल्य तोलामा पाँच सय रुपैयाँ घटेको छ । सुन आज प्रतितोला ७० हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । तिहारअघि सुन प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । सुनको मूल्य घटेपनि चाँदीको मूल्य भने यथावत...
२०७६ कार्तिक ७ गते १९:३७
काठमाडौं ,७ कात्तिक । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत ‘एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बर’को नीति लिएसँगै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (Personal-PAN) लिने क्रम निकै बढेको छ । चालु आर्थिक बर्षको साउनदेखि भदौ १५ सम्ममा मात्रै ४ लाखले प्यान लिएका छन। सरकारले...